China YF-HY-2 11 úkwù na-enweghị iko Manufacturer na Supplier | Yifan
N'oge a, tebụl efu na-eji ihe dị elu dị ọnụ ahịa dị oke ọnụ asọmpi. Ọ dịghị onye ga-egbochi mmadụ ịnweta ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ihe efu etemeete. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe efu ugbu a, enwere m obi ụtọ igosi ụzọ abụọ. Zụta enyo mgbidi ma debe oche yana dịkwa tebụl iri nri mara mma ma dị mma. Nke ahụ bụ na ihe efu efu gị ga-adịgide. Nke abuo, zuta ihe nhicha nke nwere ihe nchekwa ma obu zuta ihe ole na ole ma jiri ya mee ihe dika ihe efu a.
Inwe nsogbu gbasara oghere na obere ụlọ gị? You nwetụla mgbe ị chọrọ akụkụ nke gị? You chọrọ ohere ọzọ iji chekwaa ihe ịchọ mma gị, mmanụ na-esi ísì ụtọ, na ihe eji achọ mma? Are bụ nwanyị ma ịchọrọ ile anya kwa ụbọchị, anyị ghọtara gị. Ọ bụ ya mere anyị ji nwee azịza ị na-achọ! Anyị nkuku etemeete efu set abịa na a atọ-anọghị n'ogige atụrụ guzo mirror n'ihi na ị inyocha ọ bụla n'akuku nke ihu gị. Echela “ebe ị ga-echekwa” ihe ịchọ mma gị ọzọ. Ọ na-abịa na drawer 11 na-enye gị ohere karịa ka ịchọrọ.
Ejiri osisi ọcha mee ka ọ daba n'ụlọ ọ bụla n'ihi na anyị niile maara ya, ọcha na-eji ihe ọ bụla. Ezubere naanị site na ihe ndị adịchaghị.
Anyị kụziri gbasara gị, ọbụlagodi na ị bụ nwoke! Nwere ike ịzụta ya maka nwunye gị, enyi nwanyị ma ọ bụ nwa nwanyị. Kwere anyị, ọ bụ ihe ijuanya zuru oke!
Debe tebụl gị dị na tebụl siri ike maka anya zuru ezu. Ihe ngosi 4 dị nro (2x) nke gosipụtara na drawer drawer anyị
Nha: 150 * 60 * 80cm
Ogologo drawer: 43 * 15.6 * 60cm
Enyo nwere akụkụ nha 45.75 "W x 12.75 'D x 32.5" H
Enyo na-enweghị isi akụkụ 43.25 "W x 2.75" D x 31.5 "H
Agba: Black, ọcha, pink rose (Ọ dị na mbinye aka anyị Glossy White, Pro Black, Silver Shimmery, Champagne Gold, na Rose Gold adịchaghị gwụchara)
anyị na-akwado OEM nke nha na agba, biko gwa ndị ahịa okwu
Hollywood na-adọrọ adọrọ mara mma ya na nghọta ya dị mfe nke mere ka imirikiti ndị na-ahụ ihe etemeete, ndị na-ede blọgụ na ndị na-ede blọgụ mara mma. Jikọọ ọtụtụ puku obi ụtọ vanitistas ma hapụ ka ụbọchị gị na-egbukepụ egbukepụ!
Nke gara aga: YF-HY-1 13 na-ese ihe
Osote: YF-HY-3 3 eserese
Crystal Hollywood Glow Efu
Hollywood Classic Efu efu
Hollywood Makeup efu Australia
Hollywood efu efu na Ìhè
Vanlọ ihe efu nke Hollywood
Hollywood efu Isiokwu Set
Style nke oge a Hollywood Efucha Etemeete